Isahluko 45.Abantu Abadidekile Ngeke Basindiswe | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Kuthiwa “Okhuthazelayo kuze kube sekupheleni nguye oyosindiswa,” kodwa ingabe kulula ukwenza lokho? Akulula, futhi abanye abantu abakwazi ukukhuthazela kuze kube sekupheleni. Mhlawumbe lapho bebhekana nesikhathi esivivinyayo, noma ubuhlungu, noma isilingo, kungenzeka bawe futhi bangabe besakwazi ukuqhubekela phambili. Izinto ezenzeka nsuku zonke, kungakhathaliseki ukuthi zinkulu noma zincane, zinganyakazisa isinqumo sakho, zithathe indawo enhliziyweni yakho, zilinganisele indlela owenza ngayo umsebenzi wakho, noma zilawule ukuqhubekela phambili kwakho—zonke lezi zinto zidinga ukubhekwa njengezibaluleke kakhulu, kufanele zihlolisiswe ukuze kutholakale iqiniso, futhi zonke ziyakufundisa ekuphileni. Abanye abantu bayayeka lapho bebhekana nobunzima, futhi abakwazi ukuvuka ngemva kokuphazamiseka ngakunye. Abantu abanjalo bayiziwula futhi bangabantu abangazi lutho, abaphila ngaphandle kokuthola iqiniso, ngakho bangakhuthazela kanjani kuze kube sekupheleni? Uma into eyodwa yenzeka kuwe izikhathi eziyishumi kodwa ungafundi lutho kuyo, ungumuntu ongazi lutho futhi ongelusizo lwalutho. Abantu abaqondayo nalabo abanemfanelo yangempela yangaphakathi yokuqonda izindaba ezingokomoya bangabantu abafuna iqiniso, futhi izikhathi eziyisishiyagalombili kweziyishumi mhlawumbe bayakwazi ukuthola ukukhuthazeka, isifundo, ukukhanyiseleka noma inqubekela phambili ethile. Lapho kwenzeka into efanayo izikhathi eziyishumi kumuntu ongazi lutho, ayikho neyodwa into angayizuza ekuphileni, alukho nolulodwa ushintsho angalwenza futhi ngeke akuqonde ukwakheka kwakhe ngaphambi kokuba iphele leyo nto. Njalo lapho yenzeka uyawa, njalo udinga othile ukuba amdonse noma ambambe, abanye kumele bamhlekise. Uma engekho omhlekisayo, omdonsayo noma ombambayo ngakho kuphela konke ngaye futhi akakwazi ukusukuma. Njalo lapho kwenzeka, kuba nengozi yokuwa, futhi njalo kuba nengozi yokuthi kube kubi kunasekuqaleni. Akukhona yini ukuphela kwakhe lokho? Zikhona yini izizathu zokuba basindiswe? Ukusindisa umuntu kusho ukusindisa ingxenye eyintando yakhe nezinqumo zakhe, kanye nengxenye esenhliziyweni yakhe yokulangazelela kwakhe iqiniso nokulunga. Ukuthi umuntu uthathe isinqumo kusho ukuthi ulangazelela ukulunga, ubuhle neqiniso, futhi unonembeza. UNkulunkulu usindisa leyo ngxenye yakho, futhi ngalokhu uNkulunkulu ushintsha isici sesimo sokonakala kwakho. Uma ungenazo lezi zinto, ngakho ngeke usindiswe. Uma ungakulangazeleli ukulunga noma ujabulele ukwenza iqiniso, awunaso isifiso sokuxosha izinto ezimbi noma isinqumo sokubhekana nobunzima, futhi uma unembeza wakho ungathinteki, namandla akho okwamukela iqiniso nawo abuthuntu, awuzweli eqinisweni noma ezintweni ezenzekayo, awukwazi ukuhlukanisa, futhi awunalo ikhono lokumelana noma lokuxazulula izinto, ngakho akunakwenzeka ukuba usindiswe. Umuntu onjalo akazitusi ngalutho, akanakho ongasebenza ngakho. Unembeza wakhe ubuthuntu, ingqondo yakhe ingcolile, akajabuli ngeqiniso noma alangazelele ukulunga ekujuleni kwenhliziyo yakhe, futhi akasabeli kungakhathaliseki ukuthi uNkulunkulu ukhuluma ngokucace kangakanani ngeqiniso, njengokungathi ufile. Akuphelanga yini ngaye? Noma ubani ophefumulayo angasindiswa ngokuphefumula okungekhona okwemvelo, futhi ukuphefumula kwakhe kungabuyiselwa. Kodwa uma esefile futhi ungasekho umphefumulo wakhe, ukuphefumula kwakhe okungekhona okwemvelo ngeke kwenze lutho. Lapho wehlelwa okuthile, uyashwabana, futhi awunabufakazi, ngakho ngeke ukwazi nhlobo ukusindiswa futhi sekuphelile ngawe. Lapho ubhekana nezinto ezithile, kudingeka wenze isinqumo, kudingeka ubhekane nazo ngendlela efanele, kudingeka uzole futhi kudingeka usebenzise iqiniso ukuze uxazulule inkinga. Sikuphi isidingo sokuqonda kwakho amaqiniso avamile? Awasiwo okumane ugcwalise isisu sakho futhi awasiwo okumane ukhulume ngawo nje kuphela, futhi awasiwo awokuxazulula izinkinga zabanye; kunalokho awokuxazulula ubunzima bakho siqu, futhi kungemva kokuxazulula izinkinga zakho lapho ungakwazi khona ukuxazulula izinkinga zabanye. Kungani kuthiwa uPetru uyisithelo? Kungoba kunokuthile abaluleke ngakho, noma okuthile okufanelekela ukupheleliswa, unqume ukufuna iqiniso futhi unokuzimisela okuqinile; unesizathu, uzimisele ukubhekana nobunzima, futhi uyajabula ngeqiniso enhliziyweni yakhe, futhi lapho ebhekana nokuthile ngeke ashiye phansi. Wonke la maphuzu anamandla. Uma ungenawo la maphuzu anamandla, kusho inkinga futhi kubi. Awukwazi ukubhekana nokuthile, awazi lutho, futhi ngeke ukwazi ukuxazulula ubunzima balabo abangaphansi kwakho. Lokhu kungenxa yokuthi awukwazi ukungena, uyadideka lapho izinto zikwehlela, uyakhathazeka, uyalila, uba nombono ophambene, uyabaleka, futhi awukwazi ukuzisingatha ngendlela efanele. Ukunikeza abantu iqiniso kusho ukubanika indlela yokukhonza, futhi uma ucabanga kanjalo, khona-ke uyohlanganisa imiqondo. Kodwa uma ungathinteki futhi ungalamukeli iqiniso, ukukubonisa izinto ngeke kusize ngalutho futhi ngeke ukwazi ukuqonda ngokusebenzisa izibonelo. Ngokuhlale njalo ufundiswa ngokufunzwa, uma engasekho ozokufunza sekuphelile ngawe. Kungaba yizinto ezincane noma ezinkulu ezikwehlelayo, njalo uhlale ucabanga ngendlela engafanele, ubuthaka, futhi abukho ubufakazi obunikezayo. Okumele ukwenze noma ubambisane nakho, uyahluleka ukukwenza, okufakazela ukuthi akekho uNkulunkulu noma iqiniso enhliziyweni yakho. Ngaphandle kwendlela umsebenzi woMoya oNgcwele oshukumisa ngayo abantu, abantu bangaba nezindlela zokuphila ezisezingeni eliphansi ngokwethembela kulokho abakwenzile eminyakeni yabo yokuphila eminingi, ngamaqiniso amaningi abawazwile, ngonembeza othile, nokuncika entandweni yabo ukugwema okuthile; noma kunjalo kungcono kunendlela obuthuntu nobuthaka ngayo manje. Lokhu akunakwenzeka. Kungenzeka ukuthi niye nanganaka kule minyaka emibili edlule, ngaphandle kwalokho kungani niye naba buthuntu futhi navilapha kangaka manje? Empeleni uye wazehlisa isithunzi, wathi “Akukho okuhle ngami, ngonakele, kunjalo nje, ngizoba umuntu owonakele nje kwaphela!” Uye wazivalela umnyango, futhi awuzange uzikhandle, uthi “Yilobu ubunzima bami. Uma uthanda ungangibuyisela ekhaya!” Awukhulumi yini ubuwula? Kalula nje ugwema noma wehlisa umsebenzi wakho. Uma unonembeza nesizathu okuncanyana kufanele uwuqede ngendlela efanele umsebenzi wakho; ukumane ushiye phansi kuyinto embi futhi kungukukhaphela uNkulunkulu. Ukuphishekela iqiniso kudinga ukuzimisela okuqinile, futhi abantu abacabanga kakhulu ngendlela engafanele noma ababuthaka kakhulu ngeke bazuze lutho. Ngeke bakwazi ukukholelwa kuNkulunkulu kuze kube sekupheleni, futhi ukuthola iqiniso nokushintsha ukuma kwabo kuzobenza baphelelwe ithemba. Kuphela yilabo abafuna iqiniso ngokuzimisela abazothola iqiniso futhi bapheleliswe uNkulunkulu.
Okwedlule：Isahluko 41. Indlela Yokwazi Imvelo Yomuntu
Okulandelayo：Isahluko 47. Labo Abalahlekelwe Ngumsebenzi kaMoya oNgcwele Basengozini Kakhulu